Indlu yaseHarakeke - I-Airbnb
Indlu engasemva yonke sinombuki zindwendwe onguMarie
Singathanda ukukwamkela kwindawo yethu entle, ezimeleyo yeendwendwe ezisemaphandleni eTokomaru. Le ndlu incinci (kodwa ivulekile) inayo yonke into oyifunayo kubandakanya izixhobo zokupheka ezigcweleyo (isitovu, i-oveni / i-microwave, i-dishwasher, ifriji, izixhobo), yonke ilinen, iwasha / isomisi, ikhonkco lesandi seBose ukuze udlale umculo wakho kunye ne-wifi yasimahla. AKUKHO ntlawulo yokucoca eyongezelelweyo okanye yelinen eyongezwayo kwixabiso. Ngaphantsi kwemizuzu engama-20 ukuya ePalmerston North kunye nemizuzu eli-10 ukuya kwiYunivesithi yaseMassey kunye nenkampu yoMkhosi yaseLinton.
Indlu yethu ekhanyayo kunye ne-airy ifakwe phakathi kweeflakisi (i-harakeke) inikezela ngendawo yangasese ukuze uzibekele ukutyelela eManawatu. Ibhedi yobukhulu bokumkanikazi, itofotofo kakhulu, kwaye indlwana inazo zonke izinto onokuzifuna ukuze uhlale ixesha elide. Ukufudumeza phantsi komhlaba, umoya kunye neengubo zombane ziya kukugcina ushushu ebusika,. Iifestile ezininzi kunye neengcango kumacala omabini e-cottage zivumela impepho epholileyo epholileyo ukuba ingene eHlobo.
Indawo yokuhlala inelanga kwaye inebhedi yesofa ukuba uneendwendwe ezongezelelweyo (evumela iindwendwe ezi-4 zizonke).
Le yindawo ekhuselekileyo kakhulu nangona sinazo iikhamera zokhuseleko kwi-driveway yakho yoxolo lwengqondo.
4.96 · Izimvo eziyi-50
ITokomaru yilali encinci eyayisembindini weshishini lokugaya iflakisi laseNew Zealand ekuqaleni kweNkulungwane yama-20. Ngoku yilali encinci enabahlali abaninzi abasiya e-PN okanye kwinkampu yoMkhosi yaseLinton ekufutshane emsebenzini. I-RSA yasekhaya kunye neKlabhu yeLizwe ivulwa ngoLwesine nangoMgqibelo ebusuku (ngaphaya kwendlela ukusuka kuthi) kwaye ivenkile yasekuhlaleni ithengisa ubusuku obuninzi. Izinto ezithathwa eThai ziyafumaneka kumthengisi welori yokutya wasekhaya ngolwesithathu nangoLwesine ebusuku. Ukugoba kweHorseshoe ngumngxuma wokuqubha walapha ekhaya-pakisha ipiknikhi kwaye wonwabele ukuqubha kumlambo wasekhaya.
Siza kufumaneka iintsuku ezininzi ukunceda njengoko ndisebenza ekhaya. Ngeentsuku ezinqabileyo singekho, ungaqhagamshelana nathi nge-AirBnB app.